Kutaa 3ffaa Gosa Kadhannaa Toorbii (subaa’ee) – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Kutaa 3ffaa Gosa Kadhannaa Toorbii (subaa’ee)
August 15, 2017 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
iii. Kadhannaa Toorbii (subaa’ee) Labsii
Kadhannaan toorbii labsii biyya irratti balaan battalaa, dhibee fi waraanni yommuu ka’u, akkasumas, miseensa amantootaaf adabbiin sodaachisaa ta’e yommuu mudatu, Waaqayyo adabbii Isaa dhiifamaan, ifannaa Isaa obsaan akka deebisuuf gosa Kadhannaa toorbii qabamuudha. Gosa Kadhannaa toorbii akkanaaf namoonni Nanawwee fi Israa’eloonni godaansaan Faars jiraachaa turan kanneen akka fakkeenyaatti caqasamanii dha. Namoonni Nanawwee lallaba Yoonaas dhagahanii guddaadhaa hanga xiqqaatti guyyaa sadiif nyaata fi dhugaatii irraa of ittisuun tsoomuudhaanii fi kadhachuudhaan Waaqayyo adabbii Isaa dhiifamaan, ifannaa Isaas obsaan akka deebisu taasiseera. Kan biraa, Ayihuud godaansaan Faars jiraachaa turan ajaja Asteeriin Kadhannaa toorbii qabatanis kan caqasamu dha. Bara sana Arxeeksis Ayihud bakka jiranitti akka ajjeefamaniif yoo ajaju, ajjeechaa Sanyii guutummaa kana jalaa ooluudhaaf Ayihud Kadhannaa torbii labsiidhaan galaniiru. Asteer ol-galtee yommuu mooticha haasofsiistu uummanni biraa alarraa ajaja ajajanii Kadhannaa torbii galanii Uumaa isaanii kadhataniiru. (Asteer 4:16-28).
Biyya keenyattis, Kadhannaan torbii labsii kana fakkaatu bara Mootummaa Miniliik taasifameera. Faashistiin Xaaliyaan biyya keenya weeraruun bittaa ishee taasifachuuf daangaa ishee darbuun yeroo dhuftetti mootichi Miniliik, “Humna kan qabdu humna keetiin, humna kan hin qabne immoo kadhannaa keetiin na gargaari” jechuudhaan Kadhannaa torbii labsii qabachuun isaanii ni dubbatama. Kana bu’uureffachuudhaanis, kawaalota hundatti kadhannaan qabatameera; mootichis Taabota Giyoorgisii qabatanii addunyaa hedduu kan ajaa’ibsiise, gurraachonni birmadummaa isaaniitiif akka kaka’aniif kan dammaqse, injifannoo argameefi dhagahamee hin beekne argatanii Xaaliyaan ishee biyya keenya koloneeffachuuf yaadde qaanessuu isaanii miira olaanaan kan yaadannuu dha.
Namni Kadhannaa toorbii galuuf barbaadu qophii dursaa taasisuun isarra jiraata. Qophii tokko malee Kadhannaa torbii galuun qorumsaaf nama saaxila. Kanaafuu, Kadhannaa torbii osoo hin galiiniin dura, yeroo Kadhannaa torbii fi yeroo Torbee Kadhannaa booda qophii taasisuun barbaachisaa dha.
Qophii Kadhannaa toorbii (subaa’ee) Duraa Taasifamuu Qabu
Jalqabatti sababa Kadhannaa toorbii galluuf adda baasnee beekuun barbaachisaa dha. Namni tokko kaayyoo Kadhannaa toorbii galuuf adda baasee yoo kaa’e, Kadhannaa torbii isaatiin booda argachuu fi argachuu dhabuu isaa ni hubata. Kun osoo hin ta’iin Torbee Kadhannaa yoo gale, Kadhannaa torbii booda waanti inni gaafate waanta hin jirreef hiika dhaba. Kanaafuu, Kadhannaa toorbii galuu keenyaan duratti Kadhannaa torbii galuun maaliif akka nu barbaachise adda baasnee beekuun nurraa eegama.
Sababa Kadhannaa toorbii galuu murteessineef erga adda baasneen booddee, sababa keenya qabannee abbaa gaabbii keenya marii’achiisuun ni barbaachisa. Sababni isaas, gorsa lubaatiin deemuun jalqabumatti dirqama Kiristaanummaa waan ta’eefi dha. Kanarraan kan darbe, abbummaa isaanii fi muuxannoo jireenya isaaniitiin maal raawwachuun akka nuuf ta’u gorsa argachuuf deeggarsa nuuf taasisu. Kanafuu, Kadhannaa toorbii dura abbaa gaabbii waliin marii’achuun dirqama ta’a. Fakkeenyaaf, namni tokko yeroo Kadhannaa toorbiitti qorumsaaleen adda addaa yoo isa mudatan, gorsa isaaf kennametti fayyadamee qorumsicha ofirraa qolachuu danda’a. Akkasumas, abbaan gaabbii isaa waqtii Kadhannaa toorbiitti kadhannaan akka yaadataniif yaadachiisuun isaa gahee mataa isaa qaba.
Kadhannaa toorbii galuudhaaf yommuu yaadnu, guyyoota meeqaaf turuu akka yaadne murteessuun ni barbaachisa. Kadhannaan toorbii hanganaa hanga hangasiitti nan tura jennee karoora kan irratti qabannuu dha. Akkaataa humna fi dandeettii keenyaatti guyyaa kanaa hanga guyyaa sanaatti jennee murteessuun Kadhannaa toorbii galuun barbaachisaa ta’a. Fakkeenyaaf: – muuxannoo tokkollee osoo hin qabaatiin namni tokko “holqa keessa nan tura” osoo jedhee faayidaa isaa irra miidhaan isaa caaluu danda’a. Sababni isaas yeroo Kadhannaa toorbiitti qorumsi waanta baay’atuuf, qorumsa isatti dhufu obsaan dabarsuu dadhabuudhaan Torbeen Kadhannaa addaan cituu danda’a. Kanaafuu, yeroon Kadhannaa toorbiin duratti humnaa fi dandeettii keenya giddu galeessa taasisuun murteessuun barbaachisaa dha.
Kan biraa immoo, yeroo Kadhannaa toorbii duraa keessatti Kadhannaa torbii sanaaf yeroo fi bakka mijataa ta’e filachuun barbaachisaa dha. Mana Kiristaanaa keessatti yeroo baay’ee Kadhannaan toorbii kan galamu, tsoomiiwwan hordofeeti. Kanaafuu, Kadhannaa toorbii yeroon itti gallu yeroo tsoomii akka ta’ee fi hin taane adda baasuun barbaachisaa dha. Kadhannaan toorbii yeroo tsoomiitti qabamu nama hirmaatuuf faayidaan isaa baay’ee olaanaa dha. Sababni isaas, yeroo tsoomiitti abbootiin baay’een Kadhannaa toorbii waan qabataniif kadhannaa abbootii waliin kadhannaa fi himannaan keenya ol-bahuu ni danda’a. Kanaafuu, yeroo adda baasanii beekuun barbaachisaa dha.
As irratti garuu yeroo tsoomiitiin alatti Kadhannaan toorbii hin qabamu ilaalcha jedhu qabachuuf miti. Namni tokko yoo qorumsi isa mudate, yeroo kamittillee Kadhannaa toorbii galuu akka danda’u asirratti caqasuu ni feena. Kanarraan kan hafe, Kadhannaa toorbii bakka itti gallu filachuu qabaanna. Kadhannaa toorbii galuudhaaf bakkeewwan filannu qorumsaaf kan nu hin saaxille ta’uu isaanii dhugoomsuun barbaachisaa dha. Kunis Kadhannaa toorbii erga galaniin booda sammuun keenya akka hin bittinnoofneef deeggarsa nuuf taasisa. Wacuu fi sosochiin bakka itti baay’atutti sammuu guutuudhaan kadhachuudhaaf hin mijatu. Kanaafuu, Kadhannaa toorbii bakki itti qabannu kawaalonnii fi Manneen Kiristaanaa magaalaa irraa fagaatan filatamoo dha.
Qophii Yeroo Kadhannaa Toorbiitti (subaa’eetti) Taasifamuu Qabu
Yeroo kadhannaatti utubaatti, waan dhaabbatu kamittuu osoo hin hirkatiin, hirkoos osoo hin qabatiin miila lamaan sorooranii dhaabbachuudhaan kadhachuutu nurraa eegama. Akkasumas, fuula keenya gara bahaatti garagalchanii dhaabbachuu, asii fi achi, bitaa fi mirgatti mil’achuu dhiisuu, harka bal’isuudhaan yaada guutuudhaan ta’anii kadhachuutu barbaachisa. Faar 5:3, 133:2, Yoh 11:41.
Yeroo Kadhannaa toorbiitti walduraa duubaan kadhachuu qabaanna. Jalqaba irratti, Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Afuura Qulqulluu Waaqa tokkoon jennee qaama keenya hundumaa mallattoo Fannootiin mallatteeffachuu, jechoota “nan sagada” jedhan bira yoggu geenyus sagaduu, fannoo kan maqaa waamu bira yommuu geenyu of mallatteessuu qabna.
Itti aansuudhaanis, Yaa Abbaa keenya Isa samiiwwanirraa, faarsaa Daawiit, Galata Maariyaamii fi kanneen biroo kitaaba kadhannaa irratti argaman kadhachuun itti aansinee Yaa Abbaa keenya Isa samiiwwanirraa, kadhannaa Giiftii keenya Maariyaamii, kadhannaa Amantaa erga kadhanneen booda Yaa Abbaa keenya Isa samiiwwanirraa daballee jechuun; sanaan booda si’a 41 maaloo naaf dhiisi/kiraalaayisoon jedhama. Kan biraa immoo nama subaa’ee gale tokkorraa wanti eegamu cubbuu isaa yaadaa gadduudhaan boowuu dha. Yommuu boo’us tokkoo tokkoo cubbuu isaatiif imimmaan buusuutu isarraa eegama.
Dhumarrattis, namni Kadhannaa toorbii gale tokko Kadhannaa torbii isaa osoo hin xumuriin yookiin Kadhannaa torbii isaa addaan kutee nama kamiyyuu waliin gonkumaa wal quunnamuu hin qabaatu.
Qophii Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Boodaa Taasifamuu Qabu
Kadhannaa dhiyaateef waanta Waaqayyo nuuf raawwatu obsaan eeguun nurraa eegama. Waaqayyo araaraa fi Kadhannaa dhiyeessineef akka hawwii laphee keenyaatti, akka arjummaa Isaatti, Inni yeroo jaalatetti nuuf raawwata. Namni Kadhannaa toorbii gale hundinuu mul’ata arguu dhiisuu danda’a. Sababni isaas, deebiin Waaqayyoo eenyuufuu ifa miti waan ta’eef. Kadhannaa toorbii booda jalqabatti kan nuti argannu nageenya sammuuti. Kunis kennaa Waaqayyoo isa guddaa dha. Kanarraan kan hafe, Kadhannaa toorbii gallee kan yaadne dhabuun keenya yoo nutti dhagahame, lammaffaa qophoofnee hanga sa’aatii isa xumuraatti itti himachuu fi kadhachuutu nurraa eegama.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-08-15 20:12:542018-10-26 09:21:00Kutaa 3ffaa Gosa Kadhannaa Toorbii (subaa’ee)
Kutaa 2ffaa Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Raajotaa “Nama moofaa sana dhabamsiisaa”. Efeson.4:22